မမကောင်းနေပြီ - Grand Parents-Day
Home / Book / မမကောင်းနေပြီ
by Admins on September 13, 2020 in Book
ခင်နှင်းမူ ဖုန်းကနေ အောကားတွေကြည့်ရင်း စိတ်ထလာပြီး နို့ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ ပွတ်နေသည်။ အောကားထဲ ဘဲက ဘာဂျာကိုတာ တွေ့ရတော့ မနေနိုင်တော့ဘဲ ထိုင်ခုံပေါ်လျောချထိုင်ကာ ထမီကိုဖြေချပြီး စောက်စိကို လက်နဲ့ပွတ်နေမိတော့သည်။ သူ့ကို ပြူတင်းပေါက်ကနေ ချောင်းနေတဲ့ တစ်ဘက်အိမ်က ငထွန်းကို သူသတိမထားမိ။ ငထွန်းက ဘေးတိုက်မို့ စောကဖုတ်ကြီးကို ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘဲ စောက်မွှေးမဲနက်ကာ ထူပစ်နေတာကိုတော့ ကောင်းကောင်းတွေ့နေရသည်။ မခင်နှင်းမူရဲ့ လှုပ်ရှားဟန်နဲ့အမူအယာက သူတို့ဂွင်းထုလို့ ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တူလို့ မိန်းမတွေဂွင်းထုတာ ဒီလိုပါလားလို့ တွေးမိလိုက်သေးသည်။ ခင်နှင်းမူပြီးတော့ ကိုယ်လုံးကြီး ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တွန့်ကာညိမ်ကျသွားသည်။ ငထွန်းလည်း ချောင်းကြည့်ရင်း ဂွင်းထုတာ တစ်ချီပြီးသွားခဲ့သည်။ ခင်နှင်းမူက စောက်စိကိုဖိထားရင်း… “ကောင်းလိုက်တာ ငထွန်းရယ်မမကို တကယ်လာလိုးလှဲ့ပါလား” လို့ပြောလိုက်သံကို ငထွန်း ကောင်းကောင်းကြားလိုက်သည်။ သူလည်း တို့လိုဘဲ မှန်းထုရှာတာနေမှာလို့တွေးပြီး သူပြောတဲ့ ငထွန်းဆိုတာ ငါဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ ဆက်တွေးလိုက်ပြန်သည်။ လီးက လက်ကျန်လီးရည်တွေကို ပုဆိုးနဲ့သုပ်ပြီး ငထွန်းခြံကိုဖြဲပြီး အိမ်ကိုပြန်လိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူညီမ ယုမော်က ငထွန်းရဲ့ ရည်းစားဖြစ်သည်။ ငထွန်းနဲ့ယုမော် ချိမ်းတွေ့ဘို့ ခြံကိုဖြဲထာခြင်းဖြစ်သည်။ယုမော်ကသူ့အိမ်ကလူလစ်ရင် ဒီအိမ်ဘေးကိုထွက်လာပြီးငထွန်းနဲ့ချိမ်းတွေ့နေကျ ဖြစ်သည်။ချိမ်းတွေ့တိုင်းကစ်ဆင်ဆွဲပြီး ငထွန်းက စောက်ဖုတ်ထဲလက်ထဲ့ဆောင့်ပေးသလိုယုမော်ကလည်း ဂွင်းပြန်ထုပေးနေကြဖြစ်သည်။
ယုမော်က ရုပ်ချောပေမဲ့ ဂျောမတောင့်သည့်အပြင် ငထွန်းရဲ့လက်ပူပါ မိနေလေတော့ ပြားချပ် နေရှာသည်။ သူအစ်မခင်နှင်းမူကတော့ အရပ်ရှည်ပြီး ဂျောတောင့်သည်။ ငယ်ကတည်းက အတူနေလာကြသူများမို့ နှစ်ဖက်ရင်းနှီးကြသည်။ ငထွန်းက တစ်ဦးတည်းသောသားမို့ ကျောင်းပိတ်လို့ သူအဖေနဲ့အမေအလုပ်သွားရင် အိမ်မှာတစ်ဦးတည်း ကျန်တတ်သည်။ ဒါမဲ့ ယုမော်က အိမ်ကူးမလာရဲလို့ မလိုးခဲ့ရတာဖြစ်သည်။ မခင်နှင်းမူ ပြောလိုက်တဲ့ငထွန်းဆိုတာကို စဉ်းစားမိပြီး ခြံပြန်ကူးလိုက်သည်။ အုတ်ခုံပေါ်ကနေ တက်ကြည့်တော့ မခင်နှင်းမူကို ကုတင်ပေါ်မှာလှဲပြီး အောကားထပ်ကြည့်ရင်း စောက်စိကို လက်နဲ့ပွတ်နေတာ ထပ်တွေ့သည်။ သူမှန်တံခါးကို ခေါက်ကြည့်လိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူ ခေါင့်းနောက်ပြန်မော့ကြည့်ပြီး ထမီးပြင်ဝတ်ကာထလာသည်။ “ရှုး” ဆိုပြကာ ပြူတင်းပေါက်တံခါး လာဖွင့်ပေးသည်။ ငထွန်းလည်း အိုကေပြီမို့ ပြူတင်းပေါက်ကို ကျော်ဝင်လိုက်သည်။ အထဲရောက်ရောက်ခြင်း ခင်နှင်းမူက ငထွန်းကိုဖက်ကာ ကစ်ဆင်ဆွဲတော့သည်။ ခင်နှင်းမူလျာက ငထွန်းလျာတွေကို ကလိပြီးစုပ်သည်။ တောင်နေတဲ့ လီးကိုကိုင်ကာ သူ့ပေါင်ကြားကို ပွတ်နေသည်။ ညီးသံကတော့ တိုးတိုးလေးဘဲ ထွက်နေသည်။ ခင်နှင်းမူထိန်းပြီး ညီးနေတာဖြစ်သည်။ “မောင်လေးရယ် မမ တမ်းတနေတာဆန္ဒပြည့်သွားပြီ” လို့ပြောသည်။ ပြီးကုတင်စောင်းမှာလှဲပြီး ထမီကို ရင်ဘတ်အထိ လှန်တင်ပေးသည်။
ငထွန်းစောက်ပတ်ကို လက်နဲ့ဖြဲပြီး ဘာဂျာဆွဲပစ်လိုက်သည်။ ပထမတော့တွန့်သွားပြီး နောက်ပိုင်း ဖင်ကြီးက လေထဲမြောက်မြောက် တက်လာတော့သည်။ သူအသံမထွက်အောင် လက်ကို ကိုက်ကာထားတဲ့ပုံက အရမ်းကောင်းနေပုံရသည်။ ခင်နှင်းမူ အောကားကြည့်ပြီး လက်နဲ့အာသာဖြေနေရာက အခုဘာဂျာအကိုင်ခံနေရပြီမို့ ကြေနပ်သွားသည်။ ငထွန်းက စောက်စိကိုလျာနဲ့ ထိုးထိုးပေးရင်း စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ထိုးထဲ့ဆောင့်ပေးနေပြန်သည်။ ခင်နှင်းမူပြီးနေလို့ ငထွန်းခေါင်းကို ပေါင်နှစ်ဖက်နဲ့ခွပြီး ချုပ်ထားသည်။ အူဟီး အူးဟီး နဲ့ ညီးရင်း ဗိုက်က ပူလိုက်ဖေါင်းလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေသည်။ ခင်နှင်းမူ ကုတင်ပေါ်ရွှေ့လိုက်ပြီး ငထွန်းကိုဖက်ကာ ခွထားသည်။ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူအကျီကြယ်သီးတွေုဖြုတ်ပြီး နို့တွေကို စို့နေပြန်သည်။ တရွှီးရွှီးညီးရင်း ငထွန်းလီးကို ဖျစ်ညှစ်နေသည်။ ခင်နှင်းမူဇတ်ကနဲ ကုန်းထပြီး ငထွန်းကို ပုလွေကိုင်ပေးနေပြန်သည်။ အောကားထဲက ပုလွေကိုင်တာတွေအတိုင်း အပြည်အစုံမှုတ်ပေးတော့ ငထွန်းတအားကောင်းနေရသည်။ ကုတင်က တစ်ချက်ချက်အသံထွက်လို့ ခင်နှင်းမူ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဆင်းပြီး ပက်လက်လှန်ပေးထားသည်။ ငထွန်းကလီးကို စောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး သွင်းပေမဲ့ ခောကြီးနေလို့ ချော်ထိုးနေသည်။ ခင်နှင်းမူက စိတ်မရှည်တဲ့ပုံနဲ့ လက်နဲ့စောက်ဖုတ်ကို ဖြဲပေးသည်။ အဲ့ဒီကျမှ အဆင်ပြေပြီး ချောကနဲ ဝင်သွားတော့သည်။ ခင်နှင်းမူက ငထွန်းကိုဖင်ထားပြီး ရွှီးရွှီးနဲ့ညီးနေသည်။ “ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ်မောင်လေးလီးကြီး အဆုံးထိ ဝင်သွားပြီလား” လို့မေး သည်။ ငထွန်းက ခေါင်းညိမ့်ပြပြီး ခါးကိုကြွကာ ဆောင့်တော့သည်။
ခင်နှင်းမူကတော့ အလိုအပ်ဆုံးအချိန်နဲ့ သူတမ်းတမှန်းဆသူ ငထွန်းရဲ့အလိုးကို ခံနေရပေပြီ။ “အိုမောင်လေးရယ် လုပ်လုပ် မမကောင်းတယ်မမမနာဘူးနော် မညှာနဲ့ အီးအီးရွှီးအရမိးကောင်းတယ်ကွာ အိုအိုအအအူးရွှီး” နဲ့အောက်ကနေ ပြန်ကော့ထိုးပေးနေလေသည်။ “ဘွပ်မောင်လေးရယ် ဘပ်အဟင့်ဗြွတ်အီးဟီးဘပ် ကောင်းလိုတာဇွပ် မမ ပြီးတော့မယ် ဗြွတ်အီးဟီး” နဲ့ခင်နှင်းမူ ပြီးနေရှာသည်။ ခင်နှင်းမူ စောက်ဖုတ်ထဲက ဇိဇိနဲ့ အတွင်းသားတွေ လှုပ်နေတာကို ငထွန်းလီးကနေတဆင့် ခံစားပြီးသိနေသည်။ ငထွန်း ထပ်ဆောင်ပြန်သည်။ “မောင်လေး ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေး” လို့ပြောလာလို့ ငထွန်းကြမ်းပေးလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူခြေနှစ်ချောင်းကို ငထွန်းပုခုံးပေါ် တင်လိုက်ပြီး ဆောင့်ပေးသည်။ “အမလေးမောင်လေးရယ် ပိုကောင်းတယ်ကွာ” လို့ဆိုလာသည်။ မကြာခင်မှာဘဲ ငထွန်းရော ခင်နှင်းမူပါ ပြိုင်တူပြီးသွားတော့သည်။ နှစ်ဦးလုံး မောဟိုက်ပြီး အသက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှုနေကြရသည်။ ခင်နှင်းမူက ငထွန်းကိုအတင်းဖက်ပြီးခွထားကာ လက်မောင်းကို နမ်းနေသည်။ ပြီး… “ညကျရင် လာခဲ့အုံး” လို့ပြောသည်။ ငထွန်းလည်း ပြူတင်းပေါက်ကို ကျော်ခွကာ ခြံဖြဲပြီးအိမ်ဖက်ပြန်ခဲ့သည်။ ညကျတော့ အဖေနဲ့အမေအိပ်ချိန်မှာ ခင်နှင်းမူကို လိုးဘို့ အသာထွက်ပြီး ခြံဖြဲလာခဲ့သည်။ အမှတ်မထင် အမှောင်ထဲမတ်တတ်ရပ်နေတဲ့ ယုမော်ကို မခင်နှင်းမူ ပြူတင်ပေါက်နား ရပ်နေတာကို တွေ့လိုက်သည်။
“စောင့်နေတာ ကြာလှပြီ” လို့တိုးတိုးလေးပြောကာ ဖက်လာသည်။ မမခင်နှင်းမူအခန်းက မှီးမှိတ်ထာလို့ တော်သေးသည်လို့ ငထွန်းတွေးပြီး ယုမော်စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်ကလိပေးလိုက်သည်။ ယုမော်ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ဂွင်းထုပေးနေသည်။ ငထွန်းဒါနဲ့တင် အားမရတော့ဘဲ ယုမော်ထမီးကို မလှန်ကာလီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့လိုက်သည်။ ယုမော်က ခြေဖျားထောက်ပေးပြီး… “လိုးမလို့လား ကိုကို” လို့မေးသည်။ ဒီအချိန်မှာဘဲ လီးကစောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သွားပီး ဆောင့်နေတော့သည်။ မှန်တံခါးကို ငထွန်းလာမခေါက်သေးလို့ ခင်နှင်းမူမှန်နားကို ခြေဖွလျောက်ပြီး ကြည့်လိုက်သည်။ မသဲကွဲပေမဲ့ သူအခန်းဘေးမြေပေါ်မှာ မတ်တတ်ဆော်နေကြတဲ့အတွဲကို တွေ့လိုက်သည်။ တစ်ချက်ချက်လေအဝှေ့မှာ သစ်ရွက်တွေကြားက ထိုးဖောက်ထွက်လာတဲ့ လမ်းမီးကြောင့် ငထွန်းနဲ့ ယုမော်ဆိုတာ သိသွားသည်။ ပထမတော့ စိတ်အရမ်းဆိုးသွားပေမဲ့ သူလည်း ငါ့လိုလိုအပ်နေရှာတာနေမှာဆို ယုမော်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး ဆက်ချောင်းနေသည်။ တကယ်လိုးနေတာကို ချောင်းရတာ အောကားကြည့်ရတာထက် ဖီးလ်ပိုရှိပါလားလို့ တွေးရင်း စောက်ရည်တွေ ပေါင်ပေါ် စီးကျလာခဲ့သည်။ ယုမော်ရမ်းခါနေတာကိုကြည့်ပြီး သူပါအလိုးခံချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ ဒါမဲ့ သူတို့အရှိန်ရနေပြီမို့ သူအလှည့်လာတော့မှာဘဲ လို့တွေးပြီး ထမီကိုအောက်လှန်တင်ကာ စောက်စိကိုပွတ်ရင်း ချောင်းနေသည်။ နှစ်ယောက်သား ညိမ်သွားတော့ ခင်နှင်းမူလည်း တစ်ချီပြီးသွားသည်။ ယုမော်က ငထွန်းဖက်ပြီးနှပ်နေတာ နာရီဝက်လောက်ကြာလို့ ခင်နှင်းမူ စိတ်မရှည်ဖြစ်နေသည်။
ယုမော်အိမ်နောက်ဖက်ကို ထွက်သွားပြီး အိမ်ထဲအရောက်မှ ပြူတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ပြီး… “လာတက်ခဲ့” လို့ ခင်နှင်းမူတိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်သည်။ အိမ်ပေါ်လည်း ရောက်ရော… “မင်း.. ယုမော်နဲ့ ကြိုက်နေတာ ကြာပြီလား” လို့မေးသည်။ ငထွန်းက ခေါင်းညိမ့်ပြတော့… “စားနေတာကော ကြာပြီလား” လို့မေးသည်။ “ခုမှပါ မမရယ် မမနဲ့လိုးထားတော့သူနဲ့တွေ့ပြီးမနေနိုင်တော့လို့ပါ” လို့ ငထွန်းက ပြန်ပြောသည်။ “အေးပါထားပါတော့မင်းထပ်ဆွဲပေးနိုင်သေးတယ်မိုလား” လို့ မေးတော့.. “ကျနော်ပြီးတဲ့အထိ မဆွဲခဲ့ဘူး သူနှစ်ချိအပြီးမှာကျနော်ပြီးပြီဆို ပြောလိုက်တာ” လို့ငထွန်းက ဆိုတော့ ခင်နှင်းမူက ဖက်ပြီး… “လိမ်မာလိုက်တဲ့ မောင်လေး” ဆိုကစ်ဆင်ဆွဲရင်း ငထွန်းလီးက ယုမော်စောက်ရည်တွေကို ပုဆိုးနဲ့သုတ်ပေးနေသည်။ ငထွန်းက ရွံနေမှာစိုးလို့… “မမမမှုတ်ချင် မမှုတ်နဲ့လေ” ဆိုတော.. “့မှုတ်မှာပေါ့ကွာ” ဆိုပြီးကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချကာ ငထွန်းလီးကို ငုံခဲစုပ်တော့သည်။ ငထွန်းကပြီးသွားမှာစို့လို့ ဆွဲထူပြီး ခင်နှင်းမူထမီကို ချွတ်ကာ ဘာဂျာကိုင်းပေးလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူက ပေါင်ကားပြီးကော့ထားကာ တအင်းအင်း တိုးတိုးလေး ညီးနေသည်။ ငထွန်းက စောက်စိကို လျာနဲ့ကလော်ထိုးတော့ ခင်နှင်းမူ ဒူးက ညွတ်ညွတ်ကျလာသည်မို့ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လှန် အိပ်ပေးလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူစောက်ဖုတ်ဘေးသား ပါးပါးလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ညှပ်ဆွဲပေးတော့ ခါးကော့ပြီး.. “အားလားလား” ဆိုခါယမ်းသွားသည်။ ငထွန်းက… ”ကောင်းလား” လို့မေးတော့ မဆိုင်းမတွ ခေါင်းညိမ့်ပြနေသည်။ ငထွန်းက ဘာဂျာကိုင်ရင်း ညီအစ်မနှစ်ယောက်စလုံး စားရလို့ ပီတိဖြစ်နေသည်။
ခင်နှင်းမူက ငထွန်းကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွန်းလှဲပြီး အပေါ်ကနေ တက်ခွဆောင့်ပေးသည်။ ခင်နှင်းမူ အတော်ထန်နေတော့ ဆောင့်ချက်က ညင်သာမှု မရှိပါ။ ဘာဂျာအစွမ်းကြောင့် ခနလေးလိုးရုံနဲ့ ခင်နှင်းမူပြီးသွားပြီး ငထွန်းကိုယ်ပေါ် မှောက်ကျလာခဲ့သည်။ တရွှီးရွှီးညီးနေရာက ခနအကြာမှာတော့… “မင်း တို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ ပြိုင်တူလိုးချင်လား” လို့မေးသည်။ ငထွန်းက ”ရှက်စရာကြီး” ဆိုတော့… “ငါတို့မိန်းခလေးကတောင် မရှက်တာမင်းက ရှက်တယ်ပေါ့” လို့ပြောလို့ ငထွန်းက… “ယုမော်က လက်ခံပါ့မလား” မေးတော့ ခင်နှင်းမူက “ငါစည်းရုံးကြည့်မယ်အဆင်ပြေမှာပါ” လို့ပြောသည်။ ထိုညက ခင်နှင်းမူနဲ့ငထွန်း မိုးလင်းခါနီးအထိ လိုဖြစ်ပြီး လေးနာရီခွဲမှ ငထွန်းအိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ ညတိုင်း ယုမော်ကို ခြံထဲမှာလိုးပြီး ခင်နှင်းမူကို အိမ်းခန်းထဲမှာ လိုးလာတာ တစ်ပတ်မြောက်နေ့ညမှာ … “ကိုကိုက မမနဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ဆို” လို့ ယုမော်က မေးလာတော့သည်။ ငထွန်းလည်း ညာမရတဲ့အဆုံး ခေါင်းညိမ့်ပြရတော့သည်။ ယုမော်က လေအေးအေးနဲ့… “မမက သုံးယောက်ဆုံပြီး လိုးချင်လို့တဲ့ရှက်စရာကြီးနော် ခစ်ခစ်” ဆိုရီပြီးပြောတော့ မခင်နှင်းမူဘဲ စည်းရုံးရေးကောင်းတာလား ညီအစ်မနှစ်ယောက် ညှိဘဲထားတာလားဆိုတာ ငထွန်းစဉ်းစားမရ ဖြစ်ကာ… “မရှက်ပါနဲ့ ယုမော်ရယ်အသစ်အဆန်းဖြစ်တာပေါ့” ဆိုတော့ ယုမော်နောက်ဖက်ကို ထွက်သွားပြီး ငထွန်းလည်း ပြူတင်းပေါက် ကျော်ဝင်လိုက်သည်။
ငထွန်းအိမ်ထဲအရောက် ယုမော်လည်း စေ့ထားတဲ့တံခါးကို တွန်းဝင်လာကာ တံခါးကို ဂျက်ထိုးနေသည်။ မခင်နှင်းမူကတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ဖုန်းထဲကအောကားကို ကြည့်နေသည်။ ယုမော်က ငထွန်းကိုပြေးဖက်ပြီး ကစ်ဆင်ဆွဲရင်း လီးကြီးကိုကိုင်စွနေသည်။ ခင်နှင်းမူက… “မင်းက ယုမော်ကို ဘာဂျာကို ပေးနေတာကိုမမကြည့်ချင်တယ်” လို့လှမ်းပြောသည်။ ယုမော်အဝတ်တွေကိုငထွန်းက အကုန်လုံးချွတ်တော့ ယုမော်ရှက်နေသည်။ ယုမော်အရှက်သက်သာအောင် ငထွန်းက သူ့အဝတ်တွေပါ ချွတ်လိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူကတော့ တောင်မတ်ပြီးရမ်းနေတဲ့ ငထွန်းလီးကိုကြည့်ရင်း ကုတငိပေါ်မှာထိုင်ကာ အဝတ်တွေချွတ်နေသည်။ ငထွန်းက ယုမော်နို့တွေနဲ့စောက်ဖုတ်ကို ခုမှမြင်ဘူးလို့ သေချာစိုက်ကြည့်နေသည်။ “ရှက်တယ် ကိုကိုရယ်ကြည့်မနေနဲ့ကွာ” လို့ပြောသည်။ ငထွန်းက ထိုင်ခုံကို ကုတင်နားရွှေ့ပြီး ယုမော်ကို ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ ပြီးခြေနှစ်ချောင်းပါ တင်ခိုင်းပြီး ထိုင်ခိုင်းတော့ ယုမော်ရှက်နေသည်။ ငထွန်းက လက်နဲ့ထဲ့ဆောင့်တာဘဲခံဘူးလို့ ဘာဂျာအမှုတ်ခံရမှာကို ရွံနေသည်။ ပေါင်ဖြဲထားတဲ့ ယုမော်စောက်ဖုတ်မှာကတော့ စောက်ရည်တွေက တွဲခိုနေရှာပါပြီ။ စောက်မွှေးပါးပါးလေးအောက်က စောက်စိလေးကို ငထွန်းလျာနဲတို့တော့… “အမလေး တကိုယ်လုံးယားသွားတယ်ကိုကိုရယ်” ဆိုထိုင်ခုံပေါ်ကနေ ဖင်တစ်ချက်ကြွသွားသည်။ ငထွန်းက လျာနဲ့စောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းကို ထိုးယက်တော့ “အီးဟီး” ဖင်ထပ်ကြွပြီး ခါးပါကော့သွားသည်။ ခင်နှင်းမူက ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ ငထွန်းနောက်မှာထိုင်ပြီး လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ကျောကုန်းကြီးကို လျာနဲ့ယက်ရင်း ဖြေးဖြေးချင်း ဂွင်းထုပေးနေသည်။
ငထွန်းလျာက ဖြေးရာကနေမြန်ပြီး ယုမော်စောက်ဖုတ်ကို ပင့်ယက်ပေးနေသည်။ ခင်နှင်းမူက ယုမော်ထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံနောက်ဖက်ကနေ ခေါင်းလျှိုဝင်ပြီး ငထွန့်းလီးကို စုပ်ပေးနေပြန်သည်။ ယုမော်စောက်ရည်တွေနဲ့ ငထွန့်းတံတွေးတွေရောပြီး ခင်နှင်းမူကျောပေါ် ကျသွားသည်။ ခင်နှင်းမူအတွက် ဒါဟာ ရွံစရာမဟုတ်ဘဲ ဖီးလ်ပိုတက်စေခဲ့သည်။ ခင်နှင်းမူကလီးကို အာခေါင်ထဲထိ ထိုးထဲ့ပြီးမှ ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဆွဲထုတ်နေတော့ ယုမော်ကို ဘာဂျာကိုင်နေတဲ့ ငထွန်းလည်း ဖီးလ်တက်ကာ ယုမော်စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ဖိပြီး ဆွဲယက်အိလိုက်သည်။ “အမလေး ကိုကိုရယ်ယုမော် ကလီဇာတွေထဲကတောင် ယားသွားတယ်အဟင့်ဟင့်” ဆို ငထွန်းခေါင်းကို အတင်းတွန်းထားသည်။ ခင်နှင်းမူက အာခေါင်အထိ လီးကိုထိုးသွင်းလေ ငထွန်းက ဖိယက်လေနဲ့… “အားကိုကိုယုမော်ကောင်းသွားပြီ” လို့ပြောနေသည်။ ဒါရိုက်တာခင်နှင်းမူက နောက်ပြန်ခေါင်းလျှိုထွက်သွားပြီး… “မမအမှုတ်ခံမဲ့အလှည့်” လို့ ယုမော်ကိုပြောတော့ ယုမော်ထိုင်ခုံကနေ ဖယ်လိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူထိုင်ခုံပေါ်ကို ဒူးကွေးတင်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ငထွန်းက ထိုင်မှုတ်မရလို့ မတ်တတ်ရပ်ခါးကိုင်ကာ ဖင်နှစ်လုံးကြား ပြူထွက် နေတဲ့ခင်နှင်းမူရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖါင်းလေးကို လျာနဲ့ယက်လိုက် ထိုးမွှေလိုက် လုပ်ရင်း စအိုဝလေးပါ လျာနဲ့ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမ်ူလည်း ရွှီးရွှီးနဲ့ညီးနေရင်း အောကားထဲက ဘိုမတွေလို ဖင်ပါအလိုးခံကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်သွားသည်။
ယုမော်က ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကြား ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေလို့ ငထွန်းက ယုမော်နို့တွေကို လှည့်စို့ရင်း ခင်နှင်းမူစောက်ပတ်ထဲ လက်ထိုးထဲ့ကာ မွှေပေးနေသည်။ တအားထန်နေရှာတဲ့ ခင်နှင်းမူက… “မောင်လေးရယ်ဖင်ထဲထိုးထဲ့ဖင်ထဲထိုးထဲ့” ဆိုလို့ ငထွန်းလက်ခလယ်တဆုံး ဖင်ထဲထိုးထဲ့လိုက်သည်။ “အမလေးနာသလိုလို ကောင်းသလိုလိုကွာ” ဆိုပြောသည်။ ယုမော်ကတော့ သူအစ်မကို အံ့အောပြီးကြည့်ရင်း နို့ပေါ်က ငထွန်းလျာကြောင့် အရသာတွေ့နေသည်။ ခင်နှင်းမူက ဖင်ထဲက ဆောင့်ပေးနေတဲ့လက်ကို စိတ်စုစည်းပြီး အရသာခံကြည့်နေသည်။ “မောင်လေးလက်ထုတ်ပြီး လီးထဲ့ကြည့်ကွာ” လို့ပြောလာသည်။ ငထွန်းခါးကိုမတ်ပြီး ခင်နှင်းမူဖင်ဝမှာ လီးတေ့ကာ ဖြေးဖြေးချင်းထိုး သွင်းလိုက်သည်။ လီးတဝက်လောက်အဝင်မှာ… “မရဘူး မရဘူးပြန်ထုတ်တော့” လို့ပြောပြီး ထမီရင်လျားဝတ်ကာ အိမ်သာကို ပြေးတော့သည်။ ငထွန်းက ယုမော်ကိုကုတင်စောင်းမှာ ပက်လက်လိုးပေးနေသည်။ “ကိုကိုရယ်ကောင်းလိုက်တာကွာကိုကိုရော ကောင်းရဲ့လားဟင် မမနဲ့ယုမော် ဘယ်သူက လိုးလို့ပိုကောင်းလဲဟင်ကိုကို ယုမော်ကို ပစ်မထားနဲ့နော် ယုမော် ကိုကို့ကို တကယ်ချစ်တာပါ ကိုကိုရယ် ကိုကိုနဲ့ ယုမော်မခွဲနိုင်လို့မမပြောတာကို လိုက်လျောလိုက်တာပါအဟင့်ဟင့် လိုးပါ ကိုကိုရယ် ကိုကို ကျေနပ်တဲ့အထိ ယုမော်ကိုလိုးပါကိုကိုစလိုးတဲ့နေ့ကလေ ယုမော်သွေးတောင် ထွက်တယ်သိလား ကိုကိုရယ်ဝှီးကောင်းလိုက်တာ” ဆို ညီးတွားကာ ပြောနေသည်။
ထိုစဉ် ခင်နှင်းမူပြန်ဝင်လာပြီး ငထွန်းနဲ့ယုမော် လိုးနေတာကိုကြည့်ရင်း ဖီးလ်ယူနေရှာသည်။ “မောင်လေးမမအတွက် ချန်အုံးနော်” လို့ ပြောလိုက်သေးသည်။ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူကို အနားခေါ်ပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်းကာ ယုမော်စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကိုထုတ်လို့ လိုးပေးနေပြန်သည်။ “အဟင့်ဟင့်မောင်လေးရယ်” ဆိုအရသာတွေ့သွားသည်။ ယုမော်ခမျာမှာတော့ ငထွန်းနဲ့ ခင်နှင်းမူလိုးနေတာကို ကြည့်ရင်း စောက်စိလေးကို လက်နဲ့ပွတ်ကာ အရသာခံနေလေသည်။ “မောင်လေးရေမြန်မြန်လေးလုပ်မမကောင်းနေပြီကွာ” ဆို ခင်နှင်းမူ ကာမအရသာအပေါ် ခံစားနေရမှု သဏ္ဍန်ကိုကြည့်ရင်း ယုမော်လည်း စိတ်တွေပိုကြွနေရှာသည်။ “အီး ဆို အသံရှည်ကြီး ညီးကာ ခင်နှင်းမူ ပန်းတိုင်ဝင်သွားရှာပေသည်။ ဒါကြောင့် ငထွန်းက ယုမော်ကို တလှည့်ပြန်လိုးပေးလိုက်တော့သည်။ ခင်နှင်းမူတစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်တက်ကာ အနားယူနေသည်။ ဒီပွဲကိုစီစဉ်သူ ခင်နှင်းမူ ညိမ်ကျသွားလို့ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူကို ယုမော်ပိုကောင်းအောင် နို့တွေစို့ပေးဘို့ ပြောလိုက်သည်။ ယုမော်ခမျာမှာတော့ အလိုးလည်းခံနေရသလို သူ့အမစ်ခင်နှင်းမူရဲ့ နို့တွေစို့ပေးခံရမှုကြောင့် ပိုကောင်းတဲ့ ကာမအရသာထူးကို ခံစားနေရလေသည်။ ငထွန်းက ဖင်ကုန်းပြီးနို့စို့ပေးနေတဲ့ ခင်နှင်းမူရဲ့ စောက်စိကို လက်နဲ့လှမ်းပြီး ပွတ်ပေးလာလို့ ခင်နှင်းမူပေါင်ကားပေးလိုက်သည်။ ပြီး ယုမော်ကိုဘဲ သေချာလိုးပေးလိုက်ဘို့ ပြောသည်။ “ကိုကိုရယ်အရမ်းချစ်တယ်ကိုကို့ကို ယုမော်အရမ်းချစ်တယ် အမလေး ကိုကိုရယ်ယုမော်ကို ကိုကိုချစ်ပါနော်” လို့ ယုမော်တတွတ်တွတ်ပြောရင်း မောဟိုက်နေရှာသည်။
ခင်နှင်းမူကလည်း ငထွန်းခိုင်းသလို ယုမော်ရဲ့နို့တွေကို လျာနဲ့ဆက်တိုက် ယက်လိုက် နို့သီးခေါင်းလေးကို ကိုက်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေသည်။ “အားကိုကိုတော်ပြီကွာယုမော်ရပြီ” လို့ ပြောပြီးတားနေသည်။ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူကို ကုတင်ပေါ်ကဆွဲချကာ ကြမ်းပြင်ပေါ် လေးဘက်ကုန်းခိုင်းသည်။ ခင်နှင်းမူက… “မောင်လေးဖင်ကို မလုပ်နဲ့နော်မမမကောင်းဘူး သိလား” ဆိုလှည့်ပြောသည်။ ငထွန်းက ခေါင်းညိမ့်ပြပြီး ခင်နှင်းမူစောက်ဖုတ်ထဲ လီးထိုးထဲ့ကာ တရကြမ်းဆောင့်တော့သည်။ ယုမော်က ထလာပြီး သူအစ်မနို့တွေကို လက်နဲ့ပွတ်ကလိပေးနေသည်။ ခင်နှင်းမူ တအားကောင်းလာတော့ နောက်ပြန်တောင် ဆောင့်ပေးလာပြန်သည်။ “မမကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်” ဆိုတော့ ခင်နှင်းမူက “အင်း” လို့ပြန်ပြောသညိ။ ဘွတ်ဘပ်ဘွတ်ဘပ်နဲ့ ငထွန့်းလီးရည်တွေ ခင်နှင်းမူစောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းဝင်သွားတော့သည်။ ဒီလိုနဲ့ ယုမော်နဲ့ငထွန်းတို့နှစ်ဦး မိဘတွေကို ဖွင့်ပြောပြီး လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခင်နှင်းမူက ယုမော်နဲ့ ငထွန်းကို အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားသည်။ ဒါကိုသိတဲ့ ယုမော်က ခင်နှင်းမူကို အခန်းထဲဆွဲခေါ်လာပြီး ငထွန်းရင်ခွင်ထဲ တွန်းပို့လိုက်သည်။ ပြီး.. “မမက အကြီးဆိုတော့ညီမက ဦးစားပေးတယ်” လို့ ပြောသည်။ ငထွန်းလည်း ခင်နှင်းမူ နှုတ်ခမ်းတွေကို အားပါးတရ စုပ်နမ်းရင်း…. “မမရယ်ယုမော်ရော ကျနော်ရောကိုအရင်လိုဘဲ ချစ်ပါ မမအလိုးခံချင်ရင်လည်းမောင်လေး လိုးပေးပါ့မယ်” လို့ပြောသည်။
ခင်နှင်းမူက ငထွန်းရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းလေးထိုးဝင်ကာ.. “ယုမော်ရယ်ဒါမမ နောက်ဆုံးပါနောက်ကို ညီမလေးတို့ကိုမနှောင့်ယှက်တော့ပါဘူး”လို့ ပြောလာသည်။ ယုမော်က “မမစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့” လို့ပြောပြီး ခင်နှင်းမူအဝတ်တွေကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ အဲ့ဒီညက ခင်နှင်းမူကို ငထွန်းအရင်လိုဘဲ ဘာဂျာကိုင်ကာ ကျေနပ်သည်အထိ ဆွဲပေးပြီးမှ ယုမော်ကို ဆွဲပေးလိုက်သည်။ မခင်နှင်းမူလည်း ကိုထူးဆိုသူနဲ့ လက်ထပ်ပြီး အိမ်ခွဲဆင်းသွားသည်။ ယုမော်ကလေးမွေးလို့ ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေတဲ့တစ်ရက် မခင်နှင်းမူ အိမ်မှာလာအိပ်ဖြစ်သွားသည်။ သူတို့အဖေနဲ့ အမေက တရားစခန်းဝင်နေပြီး ငထွန်းဆေးရုံကအပြန် နောက်ကျလို့ အိမ်လာစောင့်ရင်း အိပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သည်။ ငထွန်းတို့လင်မယားက အရင်သူနေခဲ့တဲ့ အခန်းလေးမှာ အိပ်တာကို အတိတ်ကိုတွေးရင်း သတိရနေသည်။ ဒါကြောင့် သူမိဘတွေရဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ လူးလှိမ့်ရင်း အိပ်မပျော်နိုင် ဖြစ်နေသည်။ ငထွန်းလည်း သူ့လိုနေရှာမှာဘဲလို့ တွေးနေမိသည်။ သူ့အတွေးအဆုံးမှာဘဲ… “မမမမ” ဆို ငထွန်းတံခါးလာခေါက်သံကို ကြားရသည်။ ခင်နှင်းမူတံခါးနားကပ်ပြီး… “မသင့်တော်ပါဘူး မောင်လေးရယ်” လို့ ပြောလိုက်သည်။ ငထွန်းက “ခနလေးပါအိပ်မရလို့စကားပြောရအောင်ပါ” လို့ထပ်ပြောတော့ ခင်နှင်းမူ တံခါးဂျက်ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ငထွန်းက ဝင်လာလာခြင်း ခင်နှင်းမူကို အတင်းဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ဖို့လုပ်တော့ ခင်နှင်းမူ အတင်းရုန်းရင်း ညင်းနေသည်။ ငထွန်းကို အားချင်းမယှဉ်နိုင်ဘဲ ခင်နှင်းမူသက်ပြင်းချကာ အရှုံးပေးရတော့သည်။
ငထွန်းနှုတ်ခမ်းတွေကို သူပြန်နမ်းရင်း ငထွန်းနဲ့စလိုးခဲ့တဲ့နေ့ကလိုဘဲ ရင်တွေ ခုန်နေရှာသည်။ ငထွန်းရဲ့ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မှုကြောင့် တခဏအတွင်း စိတ်ပါလာတော့သည်။ ခင်နှင်းမူလက်က အလိုလို ငထွန်းလီးဆီ ရောက်သွားပြီး ဂွင်းထုပေးနေမိတော့သည်။ ပြီးငထွန်းလက်ကို ဆွဲယူကာ သူ့ပေါင်ဂွဆီ ပို့ပေးလိုက်သည်။ “ငထွန်းရယ် မင်းတအားဆိုးတယ်မမကို မင်းအနိုင်ကျင့်တယ်နော် ” လို့ ခင်နှင်းမူက ပြောလိုက်သည်။ ငထွန်းက.. “မမက ကျွန်တော်ကို အရင်စခဲ့တာမဟုတ်ဖူးလား” ဆိုကာ ခင်နှင်းမူအလိုကျ ပေါင်ကြားကို ပွတ်ပေးရင်း အနမ်းတွေချွေနေသည်။ “လူဆိုးလေးမမမနေနိုင်တော့ပါဘူးကွာ” လို့ခင်နှင်းမူပြောလိုက်ပြီး ပါးစပ်ကို အတင်းဟကာ ငထွန်းနှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာလုံးကို စုပ်နမ်းပစ်ရင်း ပုဆိုးပေါ်ကနေ လီးကြီး အတင်းဖြစ်ညှစ်နေပြန်တော့သည်။ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူထမီကို ချွတ်ချပြီး စောက်ဖုတ်ကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးတော့ စောက်ရည်တွေ ရွှဲကျလာတော့သည်။ “အိုအိုမောင်လေးရယ် အဟင့်ဟင့်အီးဟူးတအားကောင်းတာဘဲကွာ” ဆိုပြီး ငထွန်းနှုတ်ခမ်းထဲ လျာကိုအတင်းထိုးသွင်း ကလိပေးနေသည်။ ငထွန်းက သူလုပ်လေ့လုပ်ထရှိသလို ကြမ်းပြင်ထက်ထိုင်ပြီး ဘာဂျာကိုင်တော့သည်။ “အမလေးမောင်လေးရယ”် ဆို ကျောကော့သွားလေသည်။ ငထွန်းက လျာနဲ့စောက်ဖုတ်ကို ဝိုက်ယက်လိုက် ပင့်ယက်လိုက် တဆတ်ဆတ်ထိုးလိုက်နဲ့ ဘာဂျာအစွမ်းတွေ ပြလိုက်တော့… “အီးဟီးယီး ရွှီးကျွတ်ကျွတ်ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရာ” ဆို အတင်ကော့ထားပေးသည်။
ငထွန်းဘာဂျာကို တာရှည်မခံနိုင်တော့လို့ ခင်နှင်းမူ အတင်းခါးကုန်းပြီး ရုံးထွက်ကာ သေးထွက်ကျတော့မှာမို့ အိမ်သာဆီ ပြေးလေသည်။ ပြန်ရောက်လာတော့.. “မောင်လေးရယ်မမမင်းဘာဂျာကိုအရမ်းဆွဲနေပြီ အိမ်ကလူက မင်းလောက်မကောင်းဘူးကွာ” လို့ ခင်နှင်းမူဝန်ခံလာသည်။ ပြီးငထွန်းလီးကြီးကို ငုံပြီး ပုလွေကိုင်ပေးတော့သည်။ “အအမမပုလွေကိုလည်းမောင်လေးစွဲပါတယ်မမရယ်ဝှီး” ဆိုလိုက်သည်။ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူကိုနံရံမှာ လက်ထောက်ခိုင်းပြီး ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ နောက်က ပြူထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ဝကို လီးနဲ့ထောက်ထားပြီး ခင်နှင်းမူခါးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ “ဗြစ်” ကနဲ ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ “အီးဟီးအရမ်းမကြမ်းနဲ့ကွာအူး” ဆို ခင်နှင်းမူစောက်ဖုတ်ထဲက တစ်ချက်အောင့်သွားလို့ ပြောလိုက်သည်။ ငထွန်းက သတိထားပြီး ပုံမှန်လေးဆောင့်ပေးနေသည်။ နို့တွေကို လှမ်းကိုင်ပြီး နယ်ပေးလိုက်သေးသည်။ “မောင်လေးရယ်ကောင်းလာပြီကွာခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်ပါ အူးရွှီး” နဲ့ညီးနေရှာသည်။ ငထွန်းကဒူးထပ်ညွှတ်ပြီး အောက်ကနေ လှန်ထိုးဆောင့်လိုက်သည်။ “အီးငီးမမပြီးနေပြီအီးဟီးအီးးးးးး” ဆို ခင်နှင်းမူတကိုယ်လုံး တုံနေသည်။ ငထွန်းလည်း ဖြူမှ နေ့စေ့လစေ့မို့ မလိုးရလို့ စိတ်က ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ ပြီးသွားတော့သည်။ ကုတင်ပေါ်မှာ နှစ်ဦးဖက်ထိုင်နေရင်း ငထွန်းက.. “မမကို မေးစရာအကြွေးရှိနေသေးတယ်” လို့ ငထွန်းကပြောတော့ ခင်နှင်းမူက မေးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မေးငေါ့ပြသည်။
“မမနဲ့စလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကဖုန်းထဲက အောကားကြည့်ရင်းမမကိုယ့်ဘာသာ လုပ်တုံးကလေ ပြီးသွားတော့ ကောင်းလိုက်တာငထွန်းရယ်လို့ ပြောတာလေ” လို့မေးလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူက “ခစ်ခစ်ဒါလားမမကို မင်းလိုးပေးတယ်လို့စိတ်မှန်းပြီးလုပ်တာ” လို့ရီပြီး ပြန်ပြောသည်။ ငထွန်းက “မမကအဲ့ဒီထဲကစိတ်ကူးနဲ့ကျနော့်အလိုးကိုခံနေတာပေါ့လေ” ဆိုတော့ ပြုံးပြီးလီးကို ဖမ်းဆုတ်ကိုင်ရင်း ခေါင်းညိမ့်ပြသည်။ နောက်တင်မေလတ်က.. “မမကမင်းနဲ့ယုမော်ကြိုက်နေတာကို မသိတော့မင်းကို တဖက်သတ်ကြွေနေတာလေ” လို့ ပြောသည်။ ဒါကြောင့် “မမကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လုပ်တိုင်း မောင်လေးလိုးတယ်လို့ စိတ်ကူယဉ်လုပ်တာပေါ့” လို့ဆက်ပြောသည်။ ငထွန်းရင်ထဲ အကြင်နာတွေဝင်ပြီး ခင်နှင်းမူပါးလေးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူက… “ယုမော်ကို သုံးယောက်အတူနေဘို့စည်းရုံးတာကော သိချင်သေးလား” လို့ ဆက်မေးသည်။ ငထွန်းခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူက.. “မမဖုန်းထဲကအောကားတွေ ပြလိုက်တယ်သူစိတ်ဝင်စားနေတုံးငါနဲ့ငထွန်း အဲ့လိုလိုးတာလို့ပြောတော့ သူအံ့အောသွားတယ်သူက မင်းနဲ့ကြိုက်နေတယ်လို့လုံးဝ မပြောဘူးဒါနဲ့မမက အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ထဲလိုးတဲ့ကားတွေပြပြီးငထွန်းကို စည်းရုံးကြည့်မယ်ညီမလည်း ကြုံဘူးအောင်လို့ပြောတော့သူစဉ်းစားအုံးမယ်တဲ့ မမဘဲမို့ အားနားတယ်တဲ့လေ နောက်သုံးရက်လောက်မှသူစမ်းကြည့်မယ် ပြောတယ်။
အဲ့ဒီကျမှ မမက မင်းနဲ့သူ အိမ်ဘေးမှာ ညတိုင်းလိုးတာတွေ့တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်သူလန့်သွားပြီး ဒီညသုံးယောက်ဆုံမယ်လို့ပြောလာတာကွ” ဆိုရှင်းပြသည်။ ငထွန်းက “မမက စည်းရုံးရေးကောင်းတယ်လို့” ပြောပြီးဖက်ကာ နောက်ကိုလှဲချပြီး ကစ်ဆင်ဆွဲနေလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူက… “ဒီည အတူအိပ်မယ်မမကိုထပ်လုပ်ပေးအုံးနော်” ဆို အိမ်သာမှာရေသွားဆေးပြီး သန့်စင်လိုက်သည်။ ငထွန်းလည်း သူ့လီးကို ဆပ်ပြာနဲ့ ပွတ်ဆေးလိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ်မှာ နှစ်ဦးလုံးထွေးနေပြီး ပွတ်သပ်နေကြသည်။ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူနို့အုံတွေကို လျာနဲ့ယက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို မနာ့တနာကိုက်ကာပေးတော့ ဖီးလ်တက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးမာလာသည်။ တရွှီးရွှီးညီးရင်း ငထွန်းလီးကို ခင်နှင်းမူလက်နဲ့ ဖြစ်ညှစ်ပေးလာသည်။ ငထွန်းက လက်တဆစ်ဘဲ စောကဖုတ်ထဲသွင်းပြီး ပွတ်ပေးနေလိုက်သည်။ စောက်ရည်တွေနဲ့ ခပ်ချောချောလေးပွတ်ရင်း စောက်ရည်တွေ ပိုထွက်လာသည်။ “မောင်လေးရယ်အရမ်းမပွတ်နဲ့နော်” လို့ပြောပြီး ငထွန်းနားပေါက်ထဲ လျာလေးနဲ့ ထိုးထိုးပေးနေသည်။ နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ဖက်ပြီး ခင်နှင်းမူက ငထွန်းပေါင်ကြားထဲ ပေါင်ခွထိုးထဲ့လိုက်သည်။ သူ့ပေါင်ကို ငထွန်းလီးနွေးနွေးကြီးနဲ့ကပ်ကာ ဖီးလ်ယူနေသည်။ “မောင်လေးယုမော်ကိုလိုးတဲ့နေ့တိုင်းမမချောင်းတာသိလားလို့” ပြောတော့ “ကျနော်သိသားဘဲ ယုမော်သာ မသိတာချောင်းပြီးလုပ်တာ မဟုတ်လား” ဆိုတော့ “ဟိဟိ နေနိုင်မှာတဲ့လား ။
သူပြီးလို့ မမအလှဲ့ရောက်တိုင်း ဘွတ်ဘွတ်နဲ့်ငါးချက်လောက်ဆောင့်ရင်ကိုမမပြီးတာလေကွာ” ဆို ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ဝန်ခံပြီး ငထွန်းပါးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည်။ ငထွန်းက.. “မမဖင်ထဲ လီးထဲ့တဲ့နေ့ကကောဘာလို့ ထွက်ပြေးတာလဲ” လို့မေးလိုက်သည်။ ခင်နှင်းမူ ခွီခွီနဲ့ရယ်ပြီး “အီးပါချင်လာလို့ပြေးတာလေ” လို့ပြောသည်။ ငထွန်းက ဖက်ထားရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကိုင်စွပေးနေသည်။ “ရော့ စို့” ဆိုပြီး ငထွန်းပါးစပ်နားနို့ကို တိုးပေးလိုက်သည်။ ငထွန်းက တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စို့နေသည်။ ပြီးခနလွှတ်ကာ ငထွန်းက… “မမကဘာဂျာဆွဲပေးရင်တအားထန်လာရောနော်” ဆိုတော့“မင်းမိန်းမ ယုမော်ရော” လို့ ပြန်မေးလို့ ငထွန်းက “သူလည်း အတူတူဘဲ” လို့ပြောသည်။ ခင်နှင်းမူက”မိန်းမတိုင်းမကြိုက်တဲ့သူ မရှိပါဘူးကွာ” လို့ ဆက်ပြောသည်။ ငထွန်းက “မမဖုန်းထဲမှာအောကားတွေရှိသေးလား” ဆိုတော့ “့ကိုမျိုးနဲ့လက်မထပ်ခင်ကတည်းကဖျက်လိုက်တာလေ” လို့ပြောသည်။ ခင်နှင်းမူကဘဲ လီးကို စွနေရင်း… “မောင်လေးလာနေပြီစကြရအောင်” ဆို ငထွန်းလီးကိုပါးစပ်ထဲထဲ့ကာ စုပ်တော့သည်။ ငထွန်းက ခင်နှင်းမူကို ဖင်တပြန်ခေါင်းတပြန် လှဲခိုင်းပြီးပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းဝင်ကာ ဘာဂျာပြန်ကိုင်ပေးသည်။ “မောင်လေးဖွဖွလေးဘဲ လုပ်နော”် လို့ ခင်နှင်းမူပြောလိုက်ပြီး လီးပြန်စုပ်သည်။ ခင်နှင်းမူကို ဘာဂျာကိုင်ပြီး လိုးလာတာကြာပေမဲ့ ခုတခါ ဘာဂျာကိုင်မှ သတိထားမိတာက ဘေးနှုတ်ခမ်းသားပေါ်က မှဲ့နှစ်လုံးဖြစ်သည်။
ငထွန်းဖတ်ဖူးတဲ့ ကာမရှတ္တကျမ်းမှာ အဲ့လိုမိန်မးမတွေက ဏှာအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာ တွေးပြီး ခင်နှင်းမူက အမြဲဖင်စိုနေမှ နေတတ်တာ ဒါကြောင့်လို့ ငထွန်းတွေးမိတော့သည်။ “တော် ပြီကွာတက်လုပ်တော”့ လို့ ခင်နှင်းမူက တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ငထွန်းက တက်ခွပြီး ညှောင့်တော့သည်။ “အအကိုယ်တော်လေးမကြမ်းနဲ့မကြမ်းနဲ့” ဆိုတားနေပြန်သည်။ ခင်နှင်းမူလူးလွန့်ရင်း ဘေးတိုက်အနေအထားဖြစ်သွားသည်။ ခြေတဖက်က မွှေ့ယာပေါ်မှာကွေးပြီး ကျန်တဘက်ကို ငထွန်းက တစောင်းထမ်းလိုးတဲ့ ပုံစံဖြစ်သည်။ “အမလေးလေးဖိ ဆွဲပါသွားပါလားအို့ဟိုး” ဆိုခင်နှင်းမူပါးစပ်လေးဟကာ အရသာတွေ့နေသည်။ “အီးးးပြီးပြီ” ဆိုခင်နှင်းမူကပြောရင်း တကိုယ်လုံး ငါးရံ့ပြာလူးဖြစ်နေရှာတော့သည်။ ခင်နှင်းမူမှောက်ချလိုက်တော့ ငထွန်းဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက် ဖြစ်သွားပြီး ဖင်ကြီးကိုနယ်ကာ ဆောင့်ပြန်သည်။ ငထွန်းနဲ့ခင်နှင်းမူအတွက် လိုးနည်ပုံအသစ်တွေလို ဖြစ်နေပြီး ခင်နှင်းမူတအားကောင်နေရှာသည်။ “မောင်လေးရယ်မမတအားကောင်းတာဘဲ ဖင်တွေကို လက်နဲ့နယ်ဆောင့်ကွာ” လို့ ညာသံပေးလာသည်။ ဗြစ်ဗြစ်ဗြိ ဗြွတ်နဲ့ သံစုံတွေနဲ့အတူ နှစ်ယောက်သား ညိမ်ကျသွားသည်။ လူချင်ခွဲပြီး ခင်နှင်းမူ ပြောလိုက်တာကတော့… “မမကိုမောင်လေးလိုးချင်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်နော်” တဲ့ ……. ပြီးပါပြီ။
By Admins on September 13, 2020